Wararka - Qurxinta WPC mala rinjiyeyn karaa?
Qurxinta WPC waa gaagaaban balaastikada alwaaxda iyo qurxinta isku dhafan, Aad iyo aad ayey caan uga tahay adduunka oo dhan.Marka aan sharraxno isku-dhafka isku-dhafka ah, waxaan had iyo jeer dhahnaa dekedda WPC ma ahan wax rinjiyeyn ah, ma leh xabag, dayactir hooseeya.Markaasna waxaa laga yaabaa in qof uu ku jahwareeriyo taas ma loo rinjiyeyn karaa looxyada WPC? , Sidee loo rinjiyeeyaa iskuxirka banaanka ee WPC decking?
Dabcan waan rinjiyeyn karnaa iskudhafka isku dhafan, waxay lamid noqonkartaa alwaax kale.Mararka qaar waxaan rabnaa midab kale ama qurxintaada isku dhafan ayaa muujineysa xoogaa yaraaday, markaa waxaa laga yaabaa inay tahay waqtigii aad arrimaha gacmahaaga ku qabsan laheyd. rinjiga qaar ka mid ah iyo aaladaha kale ee lagama maarmaanka ah Kadibna waxaan bilaabi karnaa inaan rinjiyeysano kuwayaga banaanka WPC.
Marka hore: Ka saar ama dabool dhirta Haddii aad hawd ku haysatid looxyadaada WPC, waxaad u baahan doontaa inaad ku daboosho iyo dhammaan caleenta maro ama marada dhibicda caagga ah ama aad ka saarto Gogosha WPC.
Ta Labaad: Nadiifi sagxaddaada.Qaariyadaha WPC qaarkood waxay u isticmaalayaan shaqsi ahaan, waxaad si fudud u nadiifin kartaa WPC-gaaga isku-dhafan intaad u diyaar garoobeyso rinjiga. Qashinka aasaasiga ah iyo nadiifinta wasakhda, isticmaal biyo isku dar ah oo saabuun leh iyo mashiinka cadaadiska hooseeya ama burush jilicsan. Si aad uga saarto caaryada iyo caaryada, waxaad u baahan doontaa inaad ku dhex gasho laba qaybood oo khal iyo hal qayb biyo baaldi ku yaal. Si fiican u biyo raaci oo qalaji.
Seddexaad: Ciidee sagxaddaada isku dhafan oo ku dheji si aad u isticmaasho jaakadda ugu jilicsan ee rinjiga suurtagalka ah, waxaad ku ciideyn kartaa alwaaxda WPC-gaaga ee u socota jihada hadhuudhka si aad u jajabiso oo aad u hagaajiso looxyada dusha. xaaqin xaaqin oo biyo ku maydh mar kale Dooro astaanta dibedda ee loo yaqaan 'acrylic latex' oo ku shub baaldi baakidhkaaga wax lagu rito.
Tan afraad: Rinjigaaga banaanka WPC.Markuu aasaasiyuhu 100% qalalan yahay, waad shubi kartaa
rinjigaaga sariirtaada banaanka ah ku rido saxaarada rullaluistemadka oo aad shaqo tagto Mar labaad, hubi inaad u ogolaato arjiga koowaad inuu si buuxda u qallajiyo ka hor intaadan ku darin jaakad labaad oo suurto gal ah.
Intaa waxaa dheer, midabkee aad rabto, waxaad kaliya diyaarinaysaa rinjiyeynta marka hore Rajad waxaad kuheli kartaa nolol dabiici ah oo dheeri ah oo leh alaabada WPC.
Waqtiga boostada: Juun-09-2021
alwaax decking isku dhafan, Qurxinta WPC, Bannaanka WPC decking, Dabaqa WPC, Gogosha WPC, Qurxinta banaanka ee WPC,